Hooyo afarteeda wiil ku weysay dagaal – Breaking News,Business, Kenya, Somalia, Politics, Lifestyle, Sports
Hooyo afarteeda wiil ku weysay dagaal
Waxay yiraahdaan dagaal wiil kuma dhashee waa uu ku dhintaa, dabcan wiilkaasi dhimashadiisa xanuunka ugu badan waxa uu ku dhacaa hooyadii dhashay.
Maxaase ka xanuun badan hooyo afartii wiil ee ay dhashay ku waysay dagaal?.
Magaceedu waa Umu Riyaad, waxa ay ku nooshahay magaalada Tacis ee dalka Yemen, qisadeedana waxa ay murugo galisay qof kasta oo magaaladaas degen.
Muddo saddex sano ah ayay Umu Riyaadh ku weysay afarteeda wiil dagaalada ka socda dalkaas.
Kii ugu dambeeyay eeka dhintay waxa uu ahaa Muuse, oo ay dileen kooxda xuutiyaanta isaga oo ku jira furunta dagaalka.
Maalin kasta oo jimco ah, guriga waxaa la diyaarin jiray qado gaar ah, iyada oo Ummu Riyaadh iyo wiilasheeda 10-ka ah, gabdhaha ay sodohda u tahay iyo ilmaha ay ayayda u tahay ay dhammaan markaliya guriga ka wada qadayn jireen.
Wuxuu ahaa guri aad looga faraxsanyahay, jawigana yahay mid markasta u muuqda in uu dabaaldeg jiro.
Balse geerida waxa ay bilaabatay sanadkii 2015-kii, xiligaas oo rabshadaha ka jira Yemen ay sii kordheen. Kadib markii xulufada Sucuudiga oo taageeraya xukuumadda madaxweyne Cabdu Raboow Al Haadi Mansuur ay weeraro cir iyo dhul ah ku bilaabeen kooxda Xuutiyiinta oo qabsaday magaalada caasimadda ah ee Sanca iyo meelo kale.
Sadexdii sano ee lasoo dhaafay Ummu Riyaadh waxaa laga dilay wiilasha kala ah Taha, Riyaadh, Kamaal iyo Muuse.
Magaalada Taciis waa meel ay dhibaato badan ka jirto, dagaaladana ay aad u saameeyeen, waxaa guriga Ummu Riyaadh booqday saraakiil ka socota maamulka, kuwaas oo uga tacsiyeeyay dhibaatada soo gaartay, uguna hambalyeeyay qiimaha adag ee kaga baxay difaaca magaalada.
Xuutiyaanta ayaa go’doomiyay magaaladan kadib markii dagaal looga saaray magaalada. Waxa ay u diideen in uu gaaro gargaarka iyo badeecooyinka.
Illaa 600,000 kun qof ayaa magaalada isaga qaxay, waxayna u egtahay magaalo laga guuray oo kale.
Wiilasha laga dilay waxaa ku jira curadkeedii oo ah Riyaadh iyo gura dambeyskii oo Taha.
← Dukaanka ‘If iyo Aakhiro’ ee Jig Jiga oo lagu iibiyo agabka dadka dhintay lagu aaso
Hawlaha laamaha dowladda Mareykanka oo mar kale qarka u saaran in ay istaagaan →